जसलाई फेसबुकले मृत घोषण गरिदियो - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
गएको शनिबार दिउँसो २ बजेतिर फेसबुक चलाउन खोजें, चलेन। फेरि लगइन गर्न खोज्छु, चल्दैन। जति गर्दा पनि चल्दैन। मैले नेटमा केही समस्या भयो कि भनेर खासै ध्यान दिइनँ। अफिस जान हतार थियो। निस्किएँ। अफिसमा पनि फेसबुक चलेन।
त्यसमा रहेको ‘नोटिस आइकन’ बल्ल पढें। मेरो होस झन्डै गायब भयो। त्यसमा लेखिएको थियो– ‘दिस एकान्ट इज इन अ स्पेसल मेमोरिअलाइज्ड स्टेट।’ अर्थात् ‘यो एकाउन्ट विशेष रूपमा स्मरणीय छ।’
मित्र रामकृष्णले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशको फेसबुक खोले। ठ्याक्कै उस्तै रहेछ।
मैले आफैंलाई जताततै छामें। होइन, ठीकै छुजस्तो लाग्यो। जिउँदै पाएँ। मनले भने त्यो मानिरहेको थिएन।
जे–जतिले यसअघि मेरो प्रोफाइल हेरेर मनमनै ‘ श्रद्धाञ्जली’ दिनुभयो, कृपया फिर्ता लिइदिनुहोला। किनकि, म जिउँदै छु।
र, तपाईंहरूले पनि साथ दिएर बोलिदिनुहोस्– यत्रो अत्याचारको फेसबुकले के क्षतिपूर्ति दिन्छ ? दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेरन्द्र साउदले अन्नपूर्णपोस्टमा लेखेका छन्।